Amaanka madaxtooyada Soomaaliya oo si weyn loo adkeeyey - Awdinle Online
Home News Amaanka madaxtooyada Soomaaliya oo si weyn loo adkeeyey
Amaanka madaxtooyada Soomaaliya oo si weyn loo adkeeyey
December 14, 2019 (Awdinle Online) –Waxaa si weyn loo adkeeyay baraha Kontrool ee laga soo galo xarunta Madaxtooyadda Qaranka wixii ka dambeeyay Weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Hoteelka SYL oo ku yaalla kasoo horjeedda Madaxtooyadda.
Ciidamo dheeraad ah ayaa saaka la soo dhoobay koontaroolada ka agdhow madaxtooyada, kuwaas oo wada dhaq dhaqaaq lagu xaqiijinayo amniga.
Sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa bilaabay inay mas’uuliyiinta qaar ilaalada uga reebaan afafaaka hore ee madaxtooyada Qaranka.
Wararka ayaa sheegaya in kaliya loo ogol yahay in illaaladooda ay la gudbaan, wasiirada, wasiir Ku xigeenada, taliyeyaasha iyo mas’uuliyiinta xilalka sare haya.
Arrintan ayaa sababtay in saaka waddooyinka ka agdhow Villa Soomaaliya lagu arko ciidamo fara badan oo laga reebay mas’uuliyiintii galay xarunta Madaxtooyada.
Sida ay ogaatay Awdinle Online tallaabadan cusub ayaa timid, kadib weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday hoteelka SYL, kaas oo ay fuliyeen 5 nin oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaas oo ku labisnaa dareeska ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Dowladda ayaa qorshahan ku dooneyso inay ku xoojiso amniga, ugana hortagto in weeraro kale ay agagaarka madaxyooyada ka fuliso kooxda Al-Shabaab.
Weerarkii SYL oo dhacay habeenkii Arbacada ee la soo dhaafay ayaa waxaa uu qaatay ku dhowaad 8 saacadood, waxaana ku dhintay illaa 5 qof oo askar ay ku jiraan, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha hay’adaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Previous articleDhageyso :-Dadaallo Nabadeed Oo Lagu Wadda Degaanka Towfiiq
Next articleDhageyso :-Gudomiye ku xigeenka gobolka gedo oo sheegay in Jubbaland aysan ka Talyin Gedo